काठमाडौं, १३ जेठ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डल्बूएचओ) ले कोरोना संक्रमण घट्यो भनेर ढुक्क हुन थालेका देशहरुलाई चेतावनी दिएको छ । उसले कोरोना घटिरहेको ठाउँमा अचानक बढ्न पनि सक्ने भन्दै हेरेर बस्ने भन्दा तयारीमा लाग्न भनेको छ ।
संगठनले सरकारहरुले महामारी रोक्नका लागि आवश्यक तयारीका साथ बस्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संगठनका आपतकालीन प्रमुख डा. माइक रेयान भन्छन्, ‘अहिले संसार कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरबाट गुज्रिइरहेको छ । कयौं देशमा संक्रमण घटिपनि रहेका छन् । मध्य र दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एसिया र अफ्रिकामा संक्रमण बढिरहेको छ ।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘महामारी लहरको रुपमा आउँछ । यसको अर्थ यो यसै वर्ष त्यही ठाउँमा दोस्रोपटक पनि आउनसक्छ जहाँ अहिले चलिरहेको छ । अहिले संक्रमण देखिएको ठाउँको पहिलो लहर रोके पनि दोस्रोपटक थप तीव्रतामा पनि आउन सक्छ ।’
डा. रेयान ढुक्क भएर बस्न नहुने सुझाव दिन्छन्, ‘यो बुझ्नु अत्यावश्यक छ कि महामारी दोस्रोपटक पनि आउन सक्छ । तथ्यांक घट्न थाल्यो र संकट पनि कम भयो भनेर बस्नुहुँदैन । यसो दोस्रो लहर आउनसक्छ ।’
उनले यूरोप र अमेरिकालाई पनि चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले पनि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यूरोप र उत्तरी अमेरिकालाई उद्धार गर्ने प्रयास जारी राख्नुपर्छ । लगातार परीक्षणसहित उद्धारको रणनीति बनाइरहनु जरुरी छ । ताकि दोस्रो लहरमा पुग्दा आफूलाई बचाउन सकियोस् । कयौं अमेरिकी राज्यहरु र युरोपका देशहरुले लकडाउनका साथै संक्रमण रोक्ने अन्य उपायतिर पनि ध्यान दिन थालेका छन् । यसले अर्थव्यवस्थालाई पनि जोगाउँछ ।’